Indawo ekubhakelwa kuyo neRotisserie - iMessina
Konke ubuhle lokunambitha nsuku zonke etafuleni lakho
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-9)
Ibhikawozi a Messina okuyinkampani evela ekuhlangenwe nakho okuhle komsunguli wayo emkhakheni wezobuciko wobuciko wokukhiqiza i- Isinkwa - Amabhisikidi - Iphaneli khekhe - iFocaccia neRustici. At Ibhikawozi a Messina Kubaluleke kakhulu ukusetshenziswa kwamafulawa wemvelo, aqhamuka abakhiqizi bendawo, abaqinisekisa imiphumela emihle kakhulu ngokubhaka kanye nokupheka ukuze kusizakale umkhiqizo onempilo okhiqizwa nsuku zonke ngendlela yobungcweti ngokuphelele.
Isinkwa esiyingqayizivele kanye nama-rustics
Le ndawo yokubhaka ebalulekile eMessina ayinikezi nsuku zonke okuhle kakhulu Isinkwa esisha kudalwe ngezinhlobo ezahlukene zikafulawa, ukuze kwaneliswe ukunambitheka kwekhasimende ngalinye, kodwa futhi nangezimo ezahlukahlukene nosayizi: isinkwa, amasemishi, i-focaccia kudalwe kulandela izindlela zakudala zababhaki abakhulu be-Messina.
Kuhlongozwa nazo ama-pidoni, ama-puffishi, ama-puff pastries, ama-biscuits, ama-muston a-rustic enziwe i-oda, i-arancini, ama-pizzas, ama-foci agxiliwe, ama-dessert nama-brioches agcwele ukugcwaliswa: ukuvuselelwa kwakho konke okuthengiswayo kuqinisekisiwe, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende aletha imikhiqizo entsha ebhakwe etafuleni.
Imikhiqizo emisha neqotho
Il Bhaka eMessina zonke izinsuku ulungiselela imikhiqizo emisha neyoqobo elandela ngokucophelela izindlela zakudala zesiko likaMessina, ezama nokho ukuzivuselela ukuze alandele izidingo zomphakathi obanzi nangokwehlukahluka okwengeziwe.
Ukusebenza ngokucophelela nangokunembile kuqinisekisa umkhiqizo wokugcina okhumbula ukunambitheka kwangesikhathi esedlule, okwaziyo ukuvusa izinzwa: wonke amakhasimende athengiswa ngenxa yokhetho ngezinhlobonhlobo zezinkwa nemikhiqizo yokubhaka emashalofini, konke okusezingeni eliphakeme , kusuka kusi-Arabhu kuya kwesinkwa semvubelo yemvelo, ngaphandle kokudebesela ama-rosette namasamentshisi amajamo ahlukile.
Abasebenzi abasebasha nabachwepheshe
Isisebenzi esincane kodwa esigxile kakhulu futhi esinolwazi sazi ukwamukela amakhasimende futhi sanelise zonke izidingo zazo ngensizakalo enhle futhi esheshayo. Kungezwe kulokhu ukucubungula nokukhiqizwa ngokucophelela kwemikhiqizo yesinkwa entsha neqiniso nemikhiqizo yokubhaka enephunga elihlukile.
Ukuze uthole isinkwa esisha - i-focaccia - i-rustic ne-panaria khekhe elilungiselelwe ngezinto ezisetshenzisiwe ezisezingeni futhi okubhakiwe ngosuku, xhumana Bhaka eMessina.